Khudbaddii Madaxweyne Farmaajo Uu Maanta Kahor Jeediyey Golaha Shacabka Oo Dhameystiran – Goobjoog News
Guddoomiye Senator Abshir: Farmaajo Laguma Aamini karo Nidaamka Doorasho ee Dalka
Wasiir Xamse “Waxaan U Baahanahay Wada Shaqeyn”
Beesha Caalamka oo Ku Biirtay Shirka Murashaxiinta, Maxay Balanqaadeen?
Shirka Murashaxiinta Madaxweynaha oo Maalintii 5aad galay, Milkiileyaasha Warbaahinta Ayey Arki doonaan
Abiy Axmed oo Farmaajo usoo Diray Lataliyihiisa Amniga
Koonfur Galbeed Oo Diyaar Wanaagsan Ku Qaadanaya Garoomada Ciyaaraha Magaalada Muqdisho
Khudbaddii Madaxweyne Farmaajo Uu Maanta Kahor Jeediyey Golaha Shacabka Oo Dhameystiran
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta furay Kalfadhiga Koowaad ee golaha shacabka, isaga oo dhanka kalena horgeeyey xildhibaannada golaha shacabka Ra’iisul wasaarihiisa.
Hadaba Goobjoog News, ayaa waxay idiin soo gudbineysaa khudbaddii uu jeediyey madaxweynaha oo aynu qornay:
Guddoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo ku xigeennadiisa, Ra’iisul wasaaraha magacaaban, xubnaha golaha shacabka, Taliyeyaasha ciidanka, saxaafadda iyo marti sharafta kale, dhammaan waxaan idiin ku salaamay salaanta Islaamka.
Mudanayaal iyo marwooyin, marka hore waxaan xildhibaannada Labada gole uga mahacelinayaa doorashadii aad i doorateen inaan noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliyeed, Afarta Sano ee soo socota.
Waxaan aaminsanahay in taariikhda si gaar ah u xusi doonto go’aankii taariikhiga ahaa ee aad qaadateen, February 8, 2017.
Waxaan idiinku bogaadinayaa sidii aad uga dhabeyseen dareenkii umadda Soomaaliyeed oo meel walbo oo ay joogto u riyaaqeen isbedalkii aad gacantiina ku sameyseen.
Waxaan si gaar ah ugu bogaadinayaa haweenka iyo dhallinyarada Soomaaliyeed oo maanta qeyb weyn ka qaatey baarlamaanka Labada gole, go’aankii taariikhiga ahaa, sidoo kalena aan ka rajeynayo in xukuumadda kaalin buuxda ka qaataan.
Waxaan kaloo u mahadcelinayaa umadda Soomaaliyeed oo taageeray isbedalkaan, bulshada Soomaaliyeed ee u dabaaldegay go’aankii ay gaareen xilidhibaannada waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin, waad mahadsantihiin.
Waxaan maanta halkaan idiin kaga balanqaadayaa aniga iyo xildhibaannada sharafta leh ee Soomaaliyeed inaan ka dhabeyn doonno intii awoodeenna ah ballamadii aan idin ka qaadnay xilligii aan doorashada ku jirnay aniga iyo iyagaba.
Anigoo ku hadlaya magaceyga iyo magaca xildhibaannada sharafta leh, waxaan bulshada Soomaaliyeed u sheegayaa in amanaadii aad inoo dhiibateen aan idiin ilaalin doonno, waxaan ilaahay ka baryeenaa inuu nagu garab galo oo inoo fududeeyo Aamiin.
Mudanayaal iyo marwooyin sidaad wada dareensan tihiin bulshada Soomaaliyeed waxay inaga fileysaa wax weyn, waqtiga iyo waxa aynu haysanana ay aad u yaryihiin, inaan ka miro dhalinana waxa aynu dooneyno iney dhaqangalaan.
Waxaan kaloo aan idin ka qarsooneyn in dalka iyo dakuba ay maanta xaalad adag ku jiraan oo aan mareyno, waxaa jira abaaro baahsan oo saameeyay dalka oo dhan, dadka iyo duunyaba, waxaa jira colaado iyo amni darro, waxaa jiro kala qeybsanaan sababsaday noloshii iyo dhaqaalihii dalka.
Sidaasi darteed si aan u gudanno amaanadii bulshada inoo dhiibatay waa ineynu ku dadaalnaa in Hal saac aaney inaga khasaarin, waa in wax walbo ka hormarinaa danta guud iyo dhismaha dowladda aan ugu adeegeenno bulshada, aana ka jawaabeyno dhibaatooyinka maanta dalka ka jira.
Mudanayaal io marwooyin, barnaamijkeyga Nabad iyo nolol waxaa saldhig u ah la dagaalanka nabad diidka iyo musuq maasuqa.
Sidaan horeba u sheegay Labada cadow ee dowladnimadeena ragaadiyey waxaa Kow ka ah kooxaha hubeysan ee Al-shabaab ee habeen iyo maalina xasuuqaya umadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah, iyagoo aanan kala saareyn rag iyo dumar, caruur iyo ciroole, culimo iyo caamoba.
Waxaa Labo ka ah musq maaqusa oo sidaad la wada socotaan adduunka nagu yaqaano haddii aan Soomaali nahay dowladda ugu xun oo ugu musumaasuq badan adduunka, musuq maasuqa waa kan inaga hortaagan ineynu dhisanno dowlad aan bulshada ugu adeegno, waa kan curyaamiyey dhaqaalaheena, magaceena iyo horumarkeena.
Mudanayaal iyo marwooyin waxaan idiin ka codsanayaa in xukuumadda iyo adnigaba aad naga taageertaan sidii Labadaasi cadow aanu u ciribtiri lahayn, waxaan aaminsanahay iney suuragal tahay in si dhab ah isaga kaashanno oo aan uga adkaanno cadowgaasi Labada ah.
Waxaan ku qanacsanahay inaanu Labadaasi ka adkaan karno, haddii aynu gacmaha is qabsanno oo meel uga soo wada jeedsanno xukuumadda iyo Baarlamaanka, dowladda dhexe iyo dowalad goboleedyada iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo adduunka meel kasto ka jooga.
Mudanayaal iyo marwooyin waxaa muhiim ah inaan xuso si aan cashirro uga qaadanno, baarlamaankii sagaalaad ee Hooyada u ahaa baarlamaanka Tobonaad oo ee aan maanta nasiibka u yeesho inaan furo sida waafaqsan qodobka 90-aad ee Dastuurka KMG ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed.
Baarlamaanka 9-aad wuxuu kusoo shaqeeyey duruufo aad iyo aad u adag, haddii ay noqoto mid dhaqaale iyo mid amniba.
Aniga oo kamid ah siyaasiyiinta sida dhow ula socda howlaha baarlamaanka 9-aad, waxaan qirayaa in waqti badan kaga lumay khilaafaad siyaasadeed oo joogto noqday, oo haddii ugu yartahay Sanad ka cunay waqtigii shaqo ee baarlamaanka.
Inkastoo aaney dalka iyo dadkuba dani ugu jirin is qabqabsi siyaasadeed, hadane waxaan mar Labaad ku amaanayaa hoggaanka baarlamaanka in ay dhammeeyeen iyadoo aan shisheeye soo farogelin.
Mudanayaal iyo marwooyin, haddii aan usoo dego shaqooyinka uu qabtey baarlamaankii 9-aad xagge dejinta shuruucda, waxaan oran karaa wuxuu ansixiyey shuruucyo badan, heshiisyo badan iyo dib u eegis uu ku sameeyey Dastuurka KMG ah.
Waxaan la socdaa inuu dhameystiray qoraalkii dib u eegista Dastuurka oo uu soo saaray Saddex xulasho, laakiin aanu waqti u helin in lala wadaago dadweynaha si ay uga doodaan fikirkooda, ku darsadaan si uu u noqdo Dastuur rasmi ah.
Inkastoo loo igmaday baarlamaanka Sagaalaad Dhameystirka Dastuurka hadane duruufaha siyaasadeed ee waqtigaasi uu ka cunay waqti badan waxay iyaguna usii idmadeen baarlamaanka 10-aad inuu intaasi dhameystiro wixii qabyada ahaa.
Hadaba mudada xil haynta baarlamaanka 10-aad oo Afar Sano ah waxaa horyaalla howlaha soo socda oo aad iyo aad u culus.
Dhameystirka dib u eegista Dastuurka
Dhameystirka Shuruucda Federaalka ah
Matalaadda Dadweynaha,Waa laf dhabarta dimuqraadiyadda, sidaasi awgeed waa inaan dardargelinno dhameytirka matalaadda dadweynaha.
Illa ahadda waxaa la ansixiyay oo kaliya sharciga axsaabaha, laakiin wixii shuruuc ahaa ee la xiriirey sharcigan weli lama taaban, waxaana kamid ah: Sharciga doorashada, Diiwaangelinta dadweynaha, Jinsiyadaha iyo wixii lamid ah, si aan uga guurno qaabka aan hadda u dhisannahay oo aan u gaarno qof iyo codkiisa, abuurista dhaqangelinta hay’adaha, dhameytirka shuruucda hortabinta leh ee Dastuurka dalbanayo oo dhan 22 sharci sida ku cad Jadwalka Koowaa xarafka D iyo wixii kale oo shuruuc ah ee uu tilmaamayo Dastuurka KMG ah.
Tan ugu dambeysay ee dardargelinta hindise sharciyeedka xukuumadda keeni doonta oo aad u farabadan ee wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda.
Mudanayaal iyo marwooyin, sida ugu sahlan ee loo dedejin karo howlahaasi baaxadda leh, waxay ila tahay in la abuuro ajende xeer dejin ah oo ay heshiis ku yihiin xukuumadda iyo baarlamaanka, waxaan garan karaa in howshaasi aanu soo sheegay ay u baahan yihiin dhaqaale xoog leh oo ku bixi doona khubaro, tababaro, dhageysi dadweyne iyo wixii lamid ah.
Waxaan idiin ballanqaadayaa in wixii dhaqaale ah ee aan awoodno aan marnaba ka hagran si howshaasi ay u dhaqangasho.
Waxaa kele oo aan la socdaa duruufaha dhaqaale ee idin haya, waxaan idiin balanqaadayaa in aan wax badan ka bedli doonno nolosha iyo nabadgalyada xubnaha baarlamaanka.
Waxaan ku kalsoonahay inaan Kow isku tashanno, aan aruursanno canshuurta oo shacabka Soomaaliyeed aan barno in dowladooda taageeraan ayna dhaqaale ku bixiyaan.
Inaan kaalmo ka helno dalalka aan saaxibaha nahay waqti dhow, taas oo dhammaan mushaaraadka wax ka bedali doonta.
Waxaan idiin ku bishaareynaa inaan qorsheeyey inaan Afarta Sano gudahooda aan ku abuuro mashaariic, hoy iyo deganaansho loogu sameyn doono xildhibaannada sharafta leh.
Waxaan ilaahay ka baryayaa inuu abaarta naga dulqaado, inuu cadaalad naga qaboojiya, inuu qalbigeenna isku soo dhoweeyo oo khilaaf uu naga dulqaado.
Mudanayaal iyo Marwooyin, waxaan maanta hortiina u imid inaan idin ka codsado inaad si waafaqsan qodobka Dastuurka ee 69-aad, farqaddiisa Labaad D, kalsoonidiina siisaan Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo aan u doortey inuu hoggaamiyo xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, waxaan ku doortay kartidiisa iyo aqoonta maamulka iyo hoggaamineed ee uu u leeyahay Xasan Kheyre.
Waxaan tixgelin siin doonaa, khibradda uu u leeyahay shaqada, Xasan Cali Kheyre waa nin aad ula socda, xog fiicanna ka haysta siyaasadda gudaha iyo dibadda, tan gobolka iyo adduunkaba, waa nin aan ogahay inuu hufan yahay, waa nin aan ku aqaanno inuu ka fog yahay qabyaaladda iyo nin jeclaysi, waa nin aan u arko in aan wada shaqeyn karno, isku aragti ka noqon karno dhismaha dalka iyo dowladda, oo aan kui dhisi doonno waxaan niri Nabad iyo Nolos, sidaasi darteed waxaan maanta idiin ka codsanayaa inaad ila qaadataan Xasan Cali Kheyre inuu soo dhiso xukuumad Tayo leh, oo gudan karta shaqada culus ee bulshada Soomaaliyeed ay naga wada sugaysa.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan fursadan uga faa’ideysanayaa inaan umadda Soomaaliyeed ugu baaqo iney taageeraan walaalhooda tabaaleysan iyo kuwa dan yarta ah, gaar ahaan dadka abaaruhu halakeeyeen, waxaan dadka wax haysta ugu baaqayaa ineysan maanta walaalahooda waxbo ka hagran, sidoo kale waxaan ganacsatada iyo dadka qurbejoogta ah aan si weyn ugu baaqayaa iney iyaguna qeyb culus ka qaataan iney abaarahan dadka walaalahooda tabaaleysan ay gacan siiyaan.
Waxaan kaloo fursadan uga faa’ideysanayaa in si degdeg ah loo joojiyo dhammaan dagaallada sokeeye ee dalka ka socda, gaar ahaan kuwa dhowaan kasoo cusboonaaday degmooyinka, Cadale iyo Marka.
Ugu dambeyntii waxaan ilaahay ka baryayaa inuu abaarta naga dulqaado, inuu colaadda naga joojiyo, naga qaboojiyo iyo inuu qalbigeenna isku soo dhoweeyo oo khilaafaadka naga dulqaado.
Sida waafaqsan qodobka 90-aad ee Dastuurka, Kalfadhigga Koowaad ee golaha shacabka ee Baarlamaanka waa furan yahay.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa intaasi kusoo gabagabeeyey khudbaddiisa oo soconeysay 14 daqiiqo iyo 16 il-biriqsi.
Maamulka Gobalka Shabellaha Hoose Oo Sheegay In Ay Gacanta Ku Dhigeen Sarkaal Ka Tirsan Xarakada Al-shabaab
Somaliland Oo Bilowday Imtixaanka Shahaadiga ah
Maraakiib Mareykan Ah Oo Lagu Weerary Badda Cas
Ciidamada Faransiiska Oo Baadi Goobaya Ragii Weeraray Paris
Piajlx ilheor Buy cialis without a prescription how to get cialis
Dckaev tgbvdr viagra prices cialis professional
Qhaojd ytboqi order generic viagra online discount cialis
Ciidamada Liyuu Booliis Oo Lagu Eedeeyay Inay Dileen In Ka Badan 20 Qof Oo Shacab Ah
Kaydka Goobjoog Select Month November 2020 (144) October 2020 (168) September 2020 (153) August 2020 (263) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (366) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)
Terrific post however I was wanting to know if you could wri...
female viagra pill buy online canada sildenafil 100 online c...
viagra for men on sale viagra kadД±nlar kulГјbГј viagra at 2...
canadian pharmacy viagra online female viagra in canada viag...
generic viagra usa buy viagra 100 sildenafil tablets 5mg...